डोल्पामा नियन्त्रणमा आएन टाइफाइड : बिरामी बढ्दै, औषधि घट्दै ! - नेपालबहस
नौ उम्मेदवारमध्ये एकको रद्द, आठ कायम
ज्योति विकास बैंक र युनाइटेड रेमिटबीच सम्झौता
नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड विस्तारमा एकतिस हजार रुख काटिने
रुपनी र विष्णुपुरमा आगलागी, करिब एक लाख बराबरको क्षति
डोल्पामा नियन्त्रणमा आएन टाइफाइड : बिरामी बढ्दै, औषधि घट्दै !
डोल्पा । डोल्पामा एक साताअघि शुरु भएको टाइफाइडको प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । जिल्ला अस्पतालमा बिरामी चाप बड्न थालेपछि टाइफाइड नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो ।
बिरामीको चाप बडेपछि १५ श्ययाको जिल्ला अस्पतालमा २५ जना बिरामीले उपचार गराइरहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै २१ जना बिरामीले बेडमै उपचार गराइरहेका थिए ।
अस्पतालमा पर्याप्त बेड नहुँदा १५ जनालाई बेडमा र १० जनालाई भुइँमै राखेर उपचार गराइरहेको डाक्टर सिजन रावलले जानकारी दिए । बेड नहुँदा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत अस्पताल क्वाटरमा बस्दै आएका स्वास्थकर्मीको बेड ल्याएर उपचार गराइरहको उनले बताए ।
प्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रदेश र केन्द्रमा समेत जानकारी गराइसकिएको डा रावलले बताए । दिनहुँ बिरामी बड्दै गए टाइफाइडले ठूलो रुप लिनसक्ने खतरा रहेको बताउँदै रोकथामका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार गम्भीर हुनुपर्ने डा रावलको भनाइ छ ।
डोल्पामा फैलिँदै गएको टाइफाइडको प्रकोपले सर्वसाधारण मात्र होइन स्वास्थकर्मीसमेत थला परेका छन् । दैनिक टाइफाइडका बिरामीका उपचारमा लागि खटिएका एक दर्जन डाक्टर, नर्स र अन्य कर्मचारी आफैँ टाइफाइडले थलिएका छन् ।
प्रत्येक दिन अस्पतालमा भर्ना हुने टाइफाइडका बिरामीसँगै अस्पतालाका स्वास्थ्यकर्मीसमेत थला पर्न थालेपछि उपचार गर्ने कर्मचारीहरुको कमी हुँदै गएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा कार्यरत दुई जना चिकित्सकमध्ये डा भिमबहादुर बुढा बिरामी परेका छन् । त्यसैगरी परिचारिका दिलु बुढा, सिएमएम गङ्गा ओझा, अनमी पुष्पा ओली, झुमा हमाल, ल्याब असिष्टेन्ट कञ्चन रोकाया, अहेब दिलीप रोकायालगायत एक दर्जन कर्मचारी आफैँ बिरामी परेका छन् ।
तीन दिनदेखि उडान नहुँदा पियुस नेपालगञ्जमा आएर थन्किएको समेत उनले बताए । अन्य ठाउँभन्दा वडा नं ३ मा टाइफाइडका बिरामी धेरै भएकाले पियुस आएपछि प्रत्येक घरधुरीमा वितरण गरिने प्रजिअ केशरीले जानकारी दिए । अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई जिल्ला अस्पतालमा काजमा खटाउनसमेत पहल गरिरहेको बताइएको छ ।
अघिल्लो लेखनियमित पत्रकार सम्मेलन : मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ वटा निर्णय सार्वजनिक
अर्को लेखविप्लवका जिल्ला इञ्चार्जसहित नेता तथा कार्यकर्ता नेकपामा प्रवेश
कर्णालीमा १५ नयाँ कुष्ठरोगी फेला
सुकुटे दुर्घटनामा मृतकको संख्या १९ पुग्यो, घाइतेलाई भट्न सभापती देउवा अस्पतालमा
सुकुटे दुर्घटना : तीन बच्चासहति मृतक संख्या १७ पुग्यो (नामावली सहित)
लक्ष्मणपुरमा १५ श्ययाको अस्पताल बन्दै
प्रम ओलीको दोस्रो डायलोसिस पूरा, नारायणकाजी र भीम रावलले भेट पाएनन् !
मान्छेलाई हान्दै उदण्ड मच्चाउने राँगाेलाई गोली हानियो